Jijjiirraan taphattootaa Ganna kanaa eenyuun gara kilaba kamii geessa laata? - BBC News Afaan Oromoo
Jijjiirraan taphattootaa Ganna kanaa eenyuun gara kilaba kamii geessa laata?
Image copyright OZAN KOSE
Jijjiirraan taphatoota kubbaa miilaa Awurooppaa kan ganna kanaa banamuutti dhiyaateera. Kilaboonni hundumtuu garee isaanii bara 2019-20f cimsachuudhaaf jecha gabaa ba'anii jiru.
Taphataa isa kamitu kilaba isa kam gadhiisee kilaba isa kam gala kan jedhus odeeffamuu jalqabeera.
Ediin Hazaard: Chelsiirraa gara Riyaal Maadiriiditti
Jijjiirraa taphattootaa hanga ammaatti haasa'amaa jiru keessaa taphataan Kilaba Chelsii gara Riyaal Maadiriiditti qajeeluun isaa ifa baheera.
Turtii Piriimer Liigii Ingiliiz kana keessatti Hazaard waancaa Teerii Heneriin mo'ate caalaa akka mo'ateefi goolii Kiristaanoo Ronaaldoo Piriimer Liigii Ingiliiz kana keessatti lakkoofsise caalaa lakkoofsiseera.
Waancaa Awurooppaa eenyu mo'ata?
Kanaaf, Haazaard tarii jijjiirraa kaffaltaa Paawondii mln 150 (£150m) Chelsii gadhiisee Riyaal Maadiriiditti makamuun akka addaatti yaadataminnaa jechaa jiru.
Hazaardiin yeroo kaasan namoonni taphataa Piriimer Liigii Ingliiz keessatti hunda caaludha ykn hanga isaaf malu hin faarfamnee? Jechuun gaafatu.
Taphataa lammii Beeljiyeem kana ilaalchisee wanti sirriitti beekamu, erga bara 2012 Chelsiitti makamee taphaataa cimaa liigichaa ta'uu mirkaneesseera.
Turtii isaa Chelsii keessatti taphoota hunda irratti gooliiwwan 110 lakkoofsisuun kubbaa 81 ta'u ammo mijeessee kenneera.
Gaarii Kaahiliifi Fankatii Daboo taphattoota Ganna kana Chelsii gadhiisan biroodha.
Arsenaal hirmaannaa Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa dhabe maal yaada?
Leenjisaan kilaba Arsenaal hirmaannaa Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa bara dorgommii 2019-20 hin milkeeffatiin hafeera.
Kanaan alattis, hanga ammaatti Arsenaaliin gadhiisuuf akka jiran sadii Aaroon Raamsee, Piiter Cheekiifi Daanii Weelbeekiin alatti Laawurant Koshiliiniinis gadhiisuu mala jedhamaa jira.
Kanaaf, leenjisaan Arsenaal bakka hir'ate naaf guutu kan jedhu taphattoota dhoofsisuutti jiru jedhama.
Taphataan gaafachaa jiran tokko kilaba Fiyorentiinaaf sarara gidduurra taphatu Joordaan Veretowut isa tokkodha.
Taphataa kana fudhachuuf kilaboonni biroonis gaafachaa kan turan yommuu ta'u, kan dhiyeenyatti fedhii guddaa agarsiisaa jiru Arsenaalidha.
Joordaan Veretowut kanaan dura muuxannoo Piriimer Liigii Ingliiz keessa taphachuu kan qabu yommuu ta'u, Arsenaal yoo milkaa'eef bakka Aaroon Raamsee bu'a jedhamee eegama.
Arsenaal kana qofa osoo hin taane, taphattoota biroo Seerii A Xaaliyaan keessaas kan biroo gaggaafachaa jiraachuutu himama.
'Maanchester Piriimer Liigiif bara dhufu mo'achuuf dorgoma jedhee hin yaadu'
Taphattoonni akka Maanchester gadhiisan beekaman Hander Hereeraafi Antoonyoo Vaalenshiyaadha.
Taphattoota akka addunyaatti ciccimoodha jedhaman hunda mallatteessisuun rakkoo Maanchiter Yunaayitid hin furu jedha taphataan kilabichaa duraanii Waayinii Ruunii.
"Taphattoota qaqqaxalee addunyaarra jiran akka Lii'oneel Mesii, Kiristaanoo Ronaaldoo, Gaareez Beeliifi Serji'oo Raamoos mallatteesisuun rakkoo Maanchester Yunaayitid hin furu."
Leenjisaan kilabichaa Oleen kan jalqaba gochuu qabu, " garee sana ijaaruu irrtti fuulleffachuudha malee taphattoota qaqqaalii Paawondii mln 100 mallatteesisuun waan fayyadu hin qabu," jedha taphataan ganna 33 kun.
Akka inni jedhutti Oleen waggoota lamaa hanga sadii itti aanan turuudhaan garee kana ijaaree sadarkaa Piriimer Liigiifi Shaampiyoonsii Liigii dorgomuurra geessisuu qaba.
Kilaboonni akka Maanchester Yunaayitid, Chelsii, Arsenaaliifi Tootinhaam akkasumas Everteen sadarkaa Liiverpuuliifi Maanchester Siitiin yeroo ammaa irra jiranirra ga'uudhaaf waggoota itti aanan lamaan isaan gaafachuu danda'a."
Jijjiirraa taphattootaa Ganna kanaa waliin walqabatee gama Liiverpuuliin Albertoo Moreenoo, Daani'eel Istaariiji, Konoon Raandaaiifi Adaam Rogdaan akka gadhiisan beekameera.
Vinsenti Kompaaniifi Paatiriik Roobertis Maachester Siitii akka gadhiisaniifi Shinjii Okaazaakiifi Daanii Simpson ammo Leester Siitii warraa gadhiisan akka ta'e barameera.